Oge erugo Planbọchị Mgbasa Yourpo Gị! | Martech Zone
Thursday, January 15, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Hụnanya dị n’ikuku, ị ga-enwe ya? Ọ dị mma, ma eleghị anya, anyị agatụla mbụ mana ọ ga-abụ ikuku n’elu ọnwa na-abịa dịka ụbọchị Valentine na-eru nso. Valentbọchị Valentine bụ Satọdee, ọnwa nke iri na anọ n’afọ a - na-enye gị oge zuru oke iji zụlite ahịa email na mgbasa ozi mmekọrịta gị.
Valentbọchị Valentine bụ nnukwu azụmahịa maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa email ma bụrụ naanị ezumike nke azụmahịa na-agaghị efu.
Ihe omuma a site na Onye na-eme mkpọsa na-ekwu na ndị na-azụ ahịa na-azụta onyinye - ọ bụghị naanị maka ndị mmekọ ha - kama maka ezinụlọ na anụ ụlọ. Kwa afọ nwa m nwanyị enwebeghị enyi nwoke, ọ bụ ọrụ m iju ya anya!
Ọ bụrụ n'ị na-eji nyocha akwụ ụgwọ, Onye nduzi achoputala okwu ndi ejikoro maka ubochi Valentine ịhụnanya ịhụnanya, cute, echiche, eche echiche, na nkata.
Ndị na-akwụ ụgwọ ka na-akwụ ụgwọ kaadị kredit ndị ahụ site na ekeresimesi, yabụ na-enye ụfọdụ ngwakọta ngwakọta, ụfọdụ ego na mbupu n'efu, ebe ị na-enye oge dị ukwuu maka ndị folks ịhazi maka ezumike ịhụnanya. Valentbọchị Valentine toro site na 1800 ruo ezumike $ ijeri $ 13 maka ndị na-ere ahịa.
Tags: email mkpọsaFebruaryKeywordsMgbasa ozi ahịakwụọ ụgwọ kwa Pịaụbọchị Valentineedo edovalentines isiokwu